Ijikwa Multiple Apple Devices na Otu Ezinụlọ Apple ID abụghịzi Nightmare
Ị bụ onye iPhone 6 onye ọrụ, mgbe nwunye gị na diọkpara ada ya kwesịrị ntụkwasị obi iPhone 5 ọrụ. N'aka nke ọzọ, nwa gị ga-ahapụ n'ụlọ na-enweghị ya iPod Touch na unu nke ọdụdụ mgbe niile na-arụ "Iwe Nnụnụ" na ya iPad. Ebe ọ bụ na onye ọ bụla bụ na otu n'elu ikpo okwu, i kpebiri na-enwe otu Apple ID na-eme ka ngụkọta uche.
Firstly, ị ga-enwe ike ịchịkwa ezinụlọ na emefu na zụrụ ngwa. Nke abuo, onye ọ bụla nwere ike ịnweta ngwa, fim ma ọ bụ egwú ndị na-a zụtara n'okpuru na akaụntụ ahụ. Nke a na-azọpụta gị a otutu ego. O sina dị, ngwa na ọrụ na-ugbu a kegide otu Apple ID mgbe iwebata iOS 5 na iCloud. Gịnị bụ otu ugboro a mma bụ ugbu a a nro; ị ka nwere ike ịchịkwa ịzụrụ, ma onye data-ekere òkè na ezinụlọ bụ bụghị ihe ị ga chọrọ.
Common nsogbu na a Ịkekọrịta Apple ID
Ịkekọrịta ihe Apple ID gafee otutu ngwaọrụ n'ime ezinụlọ bụ a nkịtị ọnọdụ n'ụwa nile. Ezie na nke a dị mma, ọ pụkwara ime ka on isi ọwụwa. Were ya na ndị a niile na ngwaọrụ na-kegide otu Apple ID; na otu ID, na ngwaọrụ na-aghọta na-ekesịpde site na otu onye nwe. N'ihi ya, a ederede zitere site iMessage si mama m iPhone ga-egosi n'elu ya nwa iPad. A Facetime arịrịọ si nwa enyi nwere ike natara site papa m kama. The Photostream na aka nke ọzọ, a ga-idei mmiri na iyi nke foto na-abịa site onye ọ bụla n'ime ezinụlọ.
Ọ bụrụ na onye òtù ezinụlọ zụrụ a ọhụrụ iPad na-eji otu Apple ID, na onye ga-enwe ike ọ bụghị naanị download zụrụ ngwa, ma ga-enwe onye ọ bụla kọntaktị na ndenye kalịnda depụtaghachiri ka ngwaọrụ ọhụrụ dị ka mma. Mgbe na-ekere òkè nwere ike ịbụ ihe dị mma, na-ekerịta ukwuu nwere ike ịbụ nsogbu.
Iji Ịkekọrịta Apple ID maka iTunes / App Store ịzụrụ
Iji ghọta n'ihu, ọ kasị mma ịmata otú ihe Apple ID na ya ọrụ na-arụ ọrụ. Tupu iwebata iOS 5, ihe Apple ID na-akasị ji maka ịzụrụ n'okpuru Apple Store ma ọ bụ iTunes. Post iOS 5, na ojiji nke Apple ID e akp na-ekpuchi ọrụ nke ọrụ ndị ọzọ.
Chee echiche nke Apple ID dị ka arụ ọrụ abụọ edemede; Gị ịzụrụ (ngwa ọdịnala) na gị Personal Data (kọntaktị). Ntem, ihe karịrị ole na ole data mmekọrịta mere na nke a adịghị eme nke ọma mgbe onye data na-akọrọ. Ọrụ na-kegide ihe Apple ID agụnye iCloud (ihe ga-eme ịdị na akwụkwọ na kalenda), iMessage na Facetime; ka aha dị nnọọ ole na ole.
O sina dị, ọ bụrụ na ị ga-achọ ka nwere otu Apple ID jikwaa ezinụlọ gị ịzụrụ na-gị onye data usages iche iche, ị pụrụ ime otú ozugbo site n'iguzobe onye Apple NJ maka onye ọ bụla n'ime ezinụlọ n'ihi na ha onwe ojiji nke onye data mgbe na-ekere òkè naanị otu Apple ID maka ịzụta nzube. Nanị na-eso nzọụkwụ n'okpuru ịkọrọ ihe Apple ID maka Apple Echekwala na iTunes azụmahịa:
Nzọụkwụ 1: Open Ntọala na Họrọ iTunes & App Store
On ị ngwaọrụ, na-aga "Mwube" na-emeghe "iTunes & App Store". Ikwugharị a na niile ngwaọrụ na na-ekere òkè n'otu Apple ID.
Nzọụkwụ 2: Tinye akọrọ Apple ID ma Paswọdu
Ozugbo "iTunes & App Store" na meghere, isi na-akọrọ Apple ID na paswọọdụ. Nke a bụ Apple ID na ị ga-achọ iji n'ihi na gị ịzụrụ. N'ihe banyere ebe otu ngwaọrụ na-adịghị na iji na-akọrọ Apple ID, banye si ya ẹdude ID na-abanye na-akọrọ Apple ID si nkọwa.
N'ihi na ozi gị, ịzụrụ mere si na-akọrọ Apple ID akaụntụ ga-akpaghị aka ebudatara n'ime niile Apple ngwaọrụ jikọọ na ibe na akaụntụ. Iji zere nke a si na-eme, gbanyụọ "Automatic Downloads". Nke a nwere ike inweta ke "iTunes & App Store" ntọala.
Eji a iche iche Apple ID maka Personal Data
Ugbu a na ị a na-akọrọ Apple ID n'ihi na gị ịzụrụ, olee ihe i nwere na-eme ka ị na-onye data nọpụ iche ndị ọzọ ọrụ? Ị pụrụ nanị mezuo nke a site na iji na gị onye pụrụ iche Apple ID na mwube iCloud na ndị ọzọ na ọrụ maka onye ọ bụla na ngwaọrụ.
Nzọụkwụ 1: Nbanye na n'ime iCloud
N'okpuru onye ọ bụla ngwaọrụ 'ntọala, họrọ iCloud na banye-na n'ime App.
Jiri gị onye pụrụ iche Apple ID na paswọọdụ banye na onye ọ bụla na ngwaọrụ.
The iCloud ugbu a bụ naanị gị na-hụrụ. A nhazi ga-gbanyụọ linkages aga na Apple ID na data metụtara ya dị ka ndenye kalịnda na-agakwaghị dị.
Nzọụkwụ 2: Melite gị Services App na gị na onye Apple ID
E wezụga iCloud, ị ga-chọrọ imelite onye Apple ID ndị ọzọ ọrụ na ngwa na-eji na-akọrọ Apple ID na mbụ. N'ihi na iMessage na FaceTime, obiọma na-imelite ọhụrụ onye Apple ID nke a pụrụ ịchọta n'okpuru iCloud ntọala.
Enweta na "Ozi" na "FaceTime" na mgbe nke ahụ gasịrị n'okpuru onye ọ bụla ihe, onyeisi iTunes Apple ID na imelite ha ya.
Ugbu a, ị ọma ahazi gị ngwa ọdịnala na ọrụ na ọhụrụ gị na Apple ID. Nke a pụtara na gị onwe onye data dị ugbu a adịghị anya ka ndị ọzọ ndị òtù ezinụlọ.
> Resource> iCloud> Ijikwa Multiple Apple Devices na Otu Ezinụlọ Apple ID abụghịzi Nightmar